Artist Saalihaa Saamii Gibtsi buufata xiyyaaraa Kaayirootti hidhamtee sa&apos;a 13 booda gadhiifamte - BBC News Afaan Oromoo
Artist Saalihaa Saamii Gibtsi buufata xiyyaaraa Kaayirootti hidhamtee sa&apos;a 13 booda gadhiifamte
Image copyright Imbaasii Itoophiyaa Gibtsi
Artisti Saalihaa Saamii Kaanaadaa irraa gara Itoophiyaa deemuun uummata Walloo qe&apos;ee isaanii irraa yeroo garaagaraa buqqifaman gargaaruuf magaala Finfinneetti konsartii qopheesitee turte.
Haa tahu malee Finfinnee irraa gara Gibtsitti imalaa osoo jirtuu magaalaa Kaayirootti osoo buufata xiyyaaraatii hin bahiin uggurmauun sa&apos;aatii 14&apos;f hidhamtee gadhiifamuu ishee namoota dhimmicha hordofaa turan irraa iyyaafanneera.
Sababni ittiin hidhamte beekamuu baatus akka yeroodhaan gadhiifamtuuf namoota hedduun kallatii garaagaraan yaalii gochaa turaniiru.
Konsartiin Walloo har&apos;a gaggeeffamuuf ture maaliif dabarfame?
&apos;Fayyaan Nuhoo Goobanaa Oromoo harka jirti&apos;
Hayyuun seeraa Ameerikaa jiraatu Heenok Gabbisaa akka gadhiifamtuuf dhiibbaa gochaa turree kunis milkaa&apos;eera jedhe.
&apos;&apos;Akkuma isheen gadhiifamteen bilbilaan argadhee dubbiseen ture. Sa&apos;aatii 13 oliif hidhamuu isheefi waan nyaatamuufi dhugamu akka hin arganne natti himtee ture.&apos;&apos;
Image copyright Feesbuukii Saalihaa Saamii
Saalihaan maaliif hidhamte?
Saaliyaan mootummaa amma jiru waliin rakkoo qabdi jedhee hin yaadu kan jedhu Heenook Itoophiyaa nagaadhaan galtee bahuu yoo dandeesse Gibtsiinis nagaan galtee bahuu waan isheen dandeenyeef hin jiru jedhe.
Haa tahu malee, kanaan dura mootummaan duraanii yeroo aangoo aangoorra ture namoota Gibtsi irraa qaxxamuruun imalan qabamanii hidhamuu qaban jedhe galmeessee mootummaa Gibtsiif kan kenneru jira ture.
Saalihaanis yeroo dheeraaf gama aartiinis uummata Oromoof waan baay&apos;ee hojjettee jirti waan taheef tarii galmee kanaan dura qabamuu qabu jedhee mootummaan Itoophiyaa mootummaa Gibtsiif kennee ture sana keessa jiraachuu dandeessi.
Gama biraan ammoo, &apos;&apos;namootni saba biraa ishee hin jaallanne maqaa sobaa biraa itti maxxansanii yeroodhaaf achi keessatti ugguramtee akka turtu gochuu danda&apos;u shakkii jedhun qaba. Kun tarii dhugaa, sobas tahuu danda&apos;a.&apos;&apos;
Amma jijjirama biyyatti dhufe jedhamu kana keessa ammoo mootummotni lamaan odeeffannoo kanaan dura ture irratti waan wal hubachiisan natti hin fakkatu.
Amma garuu akka hiikamtuuf Imbaasiin Itoophiyaa Kaayiroo jiru akka gadhiifamtuuf hedduu akka ishee gargaaran natti himteetti jdhe.
&apos;&apos;Ambaasaaddaroota dabalatee namootni garaagaraa deeggarsa naaf godhaniiru na jette.&apos;&apos;
Imbaasiin Itiyoophiyaa Kaayiroo jirus Saalihaa Saamii yeroo gabaabaaf ugguramuu ishee barreessuun marii Imbaasichi qondaaltota Gibtsii dhimmichi isaan ilaallatu waliin taasiseen gadhiifamuu ishee ibseera.
Fuula Feesbuukii Imbaasichaa irratti, Imbaasiin Itiyoophiyaa akka isheen gadhiifamtuuf haala mijeessuu isaaniif mootummaa Gibtsii galateeffateera.
Maatii fi dinqisiifattota ishees baga gammaddan jedheera.
Haatahu malee, Saalihaa Saamii maaliif akka hidhamte bal&apos;inaan gaafachuuf yaallee ishee qunnamuu hin dandeenye.
Konsartiin Walloo har&apos;a Finfinneetti gaggeeffamuuf ture maaliif dabarfame?
Saalihaa Saamii: &apos;Konsartiin walloo osoo guyyaan darbuu baatee kana caalaatti milkaa&apos;a ture&apos;
5 Hagayya 2019
Nuhoo Goobanaa: &apos;Oromoon ammallee tokkummaasaatiin ala waan biraa hin qabu&apos;
Viidiyoo Har&apos;as Oromoon tokkummaa qofatu isa baasa jedha Nuhoo Goobanaa.